कहिले राम्रो माछा पर्छ, कहिले दुःख पनि उठ्दैन ! - Dainik Online Dainik Online
कहिले राम्रो माछा पर्छ, कहिले दुःख पनि उठ्दैन !
प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७७, आइतबार ५ : १०
तमानखोला । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका–१ सेउलाका टेकमान विकसहित चार जना मिलेर बिहीबार तमानखोलामा दुवाली छेके । ठिहिराउने पानीमा दिनभर खेलेपछि साँझपख १२ किलो माछा मरे । किलोको रु ६५० का दरले बेचे र पैसा बराबर बाँडे ।
भोलिपल्ट पनि माछा मार्ने योजना बुनेर उनीहरु आ–आफ्नो घर लागे । माछा मार्नेले यसरी नै हिउँदका फुर्सदिला दिनहरु खोलामा कटाउँछन् । माछाबाटै जीविका धान्छन् । पचपन्न वर्षीय विकले भदौदेखि नै माछा मार्न थालेको बताए । ‘वर्षाको खेतीपाती सकेपछि हाम्रो कामै यही हो,’ विकले भने, ‘कहिले राम्रो माछा पर्छ, कहिले दुःख पनि उठ्दैन ।’ उनले माछाबाट आएको पैसा घर खर्च र छोराछोरीको पढाइमा लगाउँछन् । कुनै महिना त माछाबाटै १५/२० हजारसम्म कमाइ हुने गरेको विकले सुनाए ।
‘तमानखोलाको असला माछा स्वादिष्ट मानिन्छ, यहाँका प्रायः सबै होटलमा माछाको परिकार हुन्छ,’ पुनले भने । धेरैजसो होटल, रेष्टुराँ व्यवसायीले नै माछा खरिद गर्छन् । माछाको सुकुटी बनाएर महङ्गोमा बेच्ने पनि हुन्छन् । बोङ्गादोभान बजारमा मात्र माछा बेचेर जीविका चलाउने २० जनाभन्दा बढी छन् ।
अवैधरूपमा विष हाल्न र विद्युतीय शक्ति लगाएर माछा मार्न रोक लगाइएको छ । ‘वडा नं ३ मा त निश्चित समय तोकेर मात्र माछा मार्न पाइने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘वडा तहमा फुकुवा भएपछि मात्र माछा मार्न दिइन्छ ।’ वडा नं ४ को लाम्मेला हुँदै, तमानगाउँ, बोङ्गादोभान, भालिबाङ, हुन्द्राफेँदी हुँदै तमानखोलाको पुछारसम्मै माछा मारिन्छ ।